သတင်းထူး သတင်းရူး madness | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သတင်းထူး သတင်းရူး madness
သတင်းထူး သတင်းရူး madness
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Apr 12, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 10 comments
အစ္စလာမ်ဝါဒ ဆန့်ကျင့်သူဟု စွပ်စွဲခြင်းခံနေရသူ ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များမှ လုပ်ကြံမည့်သတင်း ရထားသောကြောင့် နယ်လှည့်တရားပွဲအား ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းကြံ့ဖွတ် အစိုးမရမှ ကြေငြာသည်။ အမိန့်စာတွင် သံဃာတော်အား ဦးတပ်မခေါ်ဘဲ ဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဝီရသူ) ဝင်းနိုင်ဦးဟု ရင့်သီးစွာ သုံးစွဲသည့်အတွက် ပြည်သူများမှလည်း ၎င်းတို့အား ဦးတပ်ခေါ်ရန် မလိုတော့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ဘုန်းကြီးများအပေါ် နှိပ်ကွပ်မှု အစပျိုးခြင်းလော..
တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ မြန်တကျင့်ဒေသ အကြီးအကဲ ဘွားဒေါ်ဂျီး သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ဂျာပွန်ပြည်သို့ ရေပက်ခံ သွားလည်မည်ဟု သိရှိရသည်။ မြန်မာသောက်ရေသန့်ထက် ဂျာပွန်ပြည် ဘုံဘိုင်ခေါင်းမှရေ ပိုသန့်ရှင်းသဖြင့် ဤသို့သွားရကြောင်း ပြောဆိုနေရာ ရေထဲ ကျောက်ချဉ်မှုန့်ထည့်ရန် ပြည်တွင်းသောက်ရသန့် ကုမ္မဏီများ စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ မန်းလေးဂေဇက် သဒင်းဇာအား ပြည်ပအလှူငွေအချို့ လက်ခံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပေးချက် ထုတ်ပျံသည်။ အယ်ဒီတာချုပ် အယာတိုလာ ခိုင်မေနီမှ မန်းဂေဇက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထား၍ မြန်မာပြည် အုပဒေ မသက်ရောက်ကြောင်း တင်ပြရာ ကော်မရှင်လူဂျီးများ သူ့ဖင်အား စိတ်မသက်မသာကြည့်လျက် သိဝူးလေကွာ ရမလားလို့ လုပ်ကြည့်တာဟု ရှုံ့မဲ့ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်။
လုပေါင်သစ်ပါတီ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေရာ ညီလာခံ ကော်မတီ အုတ်ကထဂျီးအဖြစ် ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူ ဦးကြောက်ခဲ ဆိုသူအား ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝ မရမခြင်း မိန်းမ မယူဘဲနေမည့် ရာသက်ပန် တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ပြီး စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ အန္တရာယ်ကြောင့် အမည်မဖော်လိုသော တရုတ်ကျွန်းတကျွန်း မြေအောက်တွင် သက်စွန့်ဆံဖျား ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုး ယူဂျီလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ဆန္ဒပြပွဲတွင် မီးလောင်ဗုံးခွင်း နှိမ်နင်းခဲ့မှုအတွက် သမဒဦးသိန်းစိန်အား တရားစွဲဆိုမှုကို မုံရွာခရိုင် မတရားရုံးမှ လက်မခံ ပလပ်လိုက်သည်။ အကြောင်းမှာ သမဒဂျီးသည် စစ်အာဏာ သိမ်းစဉ်တွင်ပင် တပ်ရင်းမှူးဖြစ်ကာ ရာထူးအဆင့်ဆင့် တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ရသည့်အတွက် အဘ အဘနှင့် ခြေမွှေးမီးမလောင် လက်မွှေးမီးမလောင် နေရသူဖြစ်သဖြင့် မီးလောင်ဗုံးနှင့် လားလားမျှ ပတ်သက်စရာ မရှိဆိုသည်။ တဆက်ထဲတွင် အောက်စဖို့တက်ကသို ကျောင်းနံရံအား လေးနှစ်ဆက်တိုက် ထုံးသုတ်ခဲ့သူ ဆေးသုတ်သမား မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုသည် ကောင်းမှုတော်ဘုရားအား ထုံးသင်္ကန်းပြောင်းသုတ်ရန် ကြံစည်သည့်အတွက် နိုင်ငံဒေါ် အကြီးအကဲဟောင်းအား အကြည်အညိုပျက်ရန် အားထုတ်မှုဖြင့် မျက်ကွယ်သေဒဏ် ချမှတ်သည်။
သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် သင်္ကြန်တွင်း တရားစခန်း ဝင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းအား ထောက်ခံသူ ကန့်ကွက်သူ နှစ်ဖက်စလုံးမှ မတရားစခန်း ဝင်မည်ဆိုသဖြင့် စုံစမ်းကြည့်ရာ တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်များတွင် နိုင်ငံရေးအမြင် ကွဲပြားမှုများ ဘေးချိတ်ကာ စုံတွဲများနှင့် ပြည့်နေမည်ကိုပြောကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ ဘင်္ဂါလီများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့၏ဓာတ်ပုံ မီးရှို့ဆန္ဒပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုဟင်ဂျာအသင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ ၎င်းတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ မီးရှို့သူများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ထိပါးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်ဝတ်စုံဝတ်သည် ထင်မှား၍ ဖြစ်ရကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ဖလား..ဖလား….ရှေ့နှစ်ခါ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝရပါစေ…
ကြောင်ဇိုး… အချွန်နဲ့ “မ” တယ်…
ဟီ ဟိ… ကျုပ်အလုပ်ကမှ UG အစစ်ဗျ…
သားကြီး ထွဋ် says:
လုပေါင်သစ်ပါတီ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေရာ ညီလာခံ ကော်မတီ အုတ်ကထဂျီးအဖြစ် ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူ ဦးကြောက်ခဲ ဆိုသူအား ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိန်းမ မရမခြင်း ရာသက်ပန် တော်လှန်ရေးသမား ————
အူးအူကျောက် မကြေငြာမချင်းတော့ ဂျောနေကြမယ်ထင်တယ် –ဟီးဟီးးးးးးး
မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါ အူးအူးကြောက် အားပေးနေတယ်နော
ဟိုတယ်က လူသတ်မှုဖြစ်မှလာတည်းသူကိုမသိပါလို ့ငြင်တာ သဘာဝမကျကြောင်းထည့်ပြောပါဦး ဦးကြောင်ကြီးခင်ဗျာ
“မီးရှို့သူများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ထိပါးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်ဝတ်စုံဝတ်သည် ထင်မှား၍ ဖြစ်ရကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။”
ဘာပြောရမှန်းမသိသောကြောင့်ရီပြီးရင်းရီသွားပါကြောင်း။ မကြာမကြာ အီသို့ ပေါက်ကရအတင်း အဲလေ မွှားလို့ သတင်းစစ်သတင်းမှန်များကိုတင်စေလိုဘာဂျောင်း။
အီရန်က.. အယာတိုလာ ခိုမေနီလက်ထက်.. ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဖြစ်တော့.. ယူအက်စ်သံရုံး.. တော်လှန်ရေးသမားတွေစီးပြီး.. ဓါးစာခံလုပ်တာခံရတယ်…
အဲဒါကိုအခြေခံရိုက်ထားတဲ့ကား.. ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီက.. အော်စကာတွေ ထမ်းသိမ်းသွားတယ်..
မြန်မာပြည်ဒီပညာရေးစနစ်နဲဆက်သွားရင်.. ၁ဝနှစ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဖြစ်မယ်.. လို့.. အယားပြေတိုရှည်လာစားရင်း..ခိုးပြီးမီးနီပြ… ပြောလိုက်တယ်..
အင်မတန် attention လိုချင်နေတဲ့ ကလေးမျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေး နဲ့ မြောက်သူငယ်က နယူးယောက် ကို ချိန်ထားတာ နော်။
သူ့ကို နိုင်တာ ကြေးမုံဂျီး ဘဲရှိသတဲ့။
ကြေးမုံဂျီး ကို ပြစ်မယ်မကြိုးစားနဲ့။